နိုင်ငံခြားမှ ဝယ်ယူသည့် ပစ္စည်းများ အခွန်နှစ်ထပ် ကောက်ခံမည်
လာမယ့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က စပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ နိုင်ငံခြားက ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ပစ္စည်း တွေအပေါ် နှစ်ထပ်ခွန် ကောက်ယူတော့မယ်လို့ စစ်အစိုးရ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနက ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်က ထုတ်ပြန် ကြေညာပါတယ်။
ကြေညာချက်အရ နိုင်ငံခြားက ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းဟာ ကျပ်ငွေ သုံးသိန်းဖိုးထက် ကျော်လွန်ရင် အခွန်ဆောင်ပြီးသည် ဖြစ်စေ၊ မဆောင်ရသေးသည် ဖြစ်စေ ပြည်တွင်း အခွန်ဦးစီးဌာနကို ဝယ်ယူခွန် ၃ ဒဿမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ပေးဆောင်ရမယ်လို့ သိရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ ငွေပေးချေခဲ့ရင် နိုင်ငံခြားငွေ ပေးဆောင်ရမယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အခုလို စီးပွာေးရး ကျဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံခြားက သွင်းကုန်တွေအပေါ် အခွန်နှစ်ထပ် ကောက်တာဟာ ဆေးဝါးလို နိုင်ငံခြားက သွင်းလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဈေးကြီးလာစေနိုင်တာက လွဲပြီး ဘာအကျိုးမှ မရှိကြောင်း ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောပါတယ်။
ပြည်တွင်း အခွန်ဦးစီးဌာနရဲ့ စာရင်းဇယားတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တနှစ် ပျမ်းမျှငွေ ကျပ် ဘီလီယံ ၉၀၀ အခွန် ကောက်ခံရရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပို့ကုန်လုပ်ငန်း နလံထူလာဖို့ ပို့ကုန်ရငွေ အခွန်ထပ်လျှော့မည်
အဓိက ပို့ကုန်များ ၆ လကြာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးမည်
ပြည်ပကို ဆန်တင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်အသစ် ချထားပေးမှု ရပ်ဆိုင်း
အခွန်နဲ့ အတိုးနှုန်းတွေလျှော့မယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
How to convert 300,000 Kyats to us$ by law.
is it6kyats = 1 us$ ?
Dec 13, 2010 06:53 AM
ဘယ္လို အၾကံၾကိးေတြႏွင့္ လုပ္တာေတြတံုး။ ဒီလိုသာအခြန္ေတြထပ္ထပ္ျပိးေတာ့ ေကာက္ေနရင္ က်ေနာ္တို ့လို နိဳင္ငံျခားသြားျပိး ကၽြန္ခံ၊ အခြန္ေတြ တနင့္တပိုးေပး၊ အဲဒီအခြန္ေတြက ဘယ္လိုမွစာရင္းဇယားမရိွ။ သန္းေရႊေျမး ေမ်ာက္ေလာင္း က စကၤာပူလာျပိးေတာ့ ကာစီနိဳမွာ ရံွဳးဖို ့လား။ ေနာက္ထပ္ျပိးေတာ့ အခြန္ေကာက္အံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေသဖြယ္ပဲရိွေတာ့တယ္။
Dec 12, 2010 11:29 PM
လုပ္ ပါ အံုး မာ မီ စု ေရ။
Dec 12, 2010 09:18 AM